वोमी लघुवित्तको रु. १०.१० करोडको हकप्रद सेयर आजबाट निश्कासन Bizshala -
काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले आज बिहीबारदेखि रु. १०.१० करोड मूल्यबराबरको हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको छ ।
वोमी लघुवित्तले प्रतिकित्ता रु. १०० रुपैयाँ अंकित दरका १० लाख १० हजार ८८० कित्ता हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको हो । सतप्रतिशत हकप्रदपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी बढेर २० करोड २१ लाख ७६ हजारको उचाईमा पुग्नेछ ।
हकप्रदको निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्नेछ । हकप्रद खरीदका लागि योग्य सेयरधनीले भदौ ११ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् ।
यो कम्पनीको हकप्रद सेयरलाई इक्रा नेपालले ग्रेड फोर प्लसको रेटिङ दिएको छ । यसको अर्थ कम्पनीको अवस्था औसतभन्दा कमजोर छ भन्ने हो । तर, समूह फोरभन्दा फोर प्लसको रेटिङले तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक अवस्थालाई जनाउँछ ।
कम्पनीले हकप्रद सेयरका लागि असार २७ गतेलाई बुक क्लोजको मिति तोकेको थिो । यसको अर्थ असार २६ गतेभित्र यो कम्पनीको सेयर खरीद गरी सेयरधनी कायम भएकाहरुले हकप्रदका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्।
वोमी माइक्रोफाइनान्स नागरिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडसँग मर्जरको प्रक्रियामा छ ।
womi micro-finance right share Q4-2075/76